Linux distros များ၏အချိန်ကျော်ဖြန့်ဝေ | Linux မှ
Linux distros များ၏အချိန်ကျော်ဖြန့်ဝေ
phico | | GNU / Linux များ, အကြံပြုပါသည်
ဤဆောင်းပါးတို၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ၎င်းကိုမသိသူများ (သို့) ၎င်းကိုဖြတ်သန်းသွားခြင်းနှင့်သိလိုစိတ်အဖြစ်သာမြင်ခြင်းများကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ Linux distros များ၏အချိန်ကျော်ဖြန့်ဝေ။ ၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းသောခရီးစဉ်နှင့်တူပါလိမ့်မည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်သည်အလွန်သိကောင်းစရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောမြေပုံပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
1 GNU / Linux Distribution Timeline အရပထမသုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း
3 Linux သည်အလွန်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြားသည်။ ဘယ် distro ကိုငါရွေးရမလဲ။
GNU / Linux Distribution Timeline အရပထမသုံးဖြန့်ဖြူးခြင်း
ဒီခရီးစဉ်ကနေကျွန်တော့်ကိုသူတို့နဲ့အတူလိုက်ပါနိုင်အောင်သူတို့လုပ်ရမှာကပထမဆုံးဆိုက်ကို download လုပ်ပါ။GNU / Lဖြန့်ဖြူးအချိန်ဇယား inux»ကိုယ်စားပြုသောပုံ Linux distros များ၏အချိန်ကျော်ဖြန့်ဝေ။ ထိုနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် GUI ကို တစ်ခုမဟုတ်ပါ console ကို, 😉
Linux ဖြန့်ဖြူးရေး Timeline - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မတူကွဲပြားသောပုံစံများဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည့် ၂၀၁၂-၁၀-၂၉ ရက်စွဲပါဗားရှင်း ၁၂.၁၀ ကိုတင်ပြသည်။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့် site မန်နေဂျာများကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ A. အ Lundqvist y Rod Rodic။ အလားတူပင် Fabio loli ကျွန်ုပ်တို့မှကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေ့စွဲသို့နောက်ဆုံးပုံရိပ်တစ်ခုကိုပေးသည် ဝီကီပီးဒီးယား.
ပုံကြီးကိုကျဉ်းမြောင်း။ ကျဉ်းမြောင်းသည့်ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီးအမည်များကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖတ်ရန် ၁၀၀% zoom ကိုရွေးချယ်သည်။ စကားမစပ် Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အလွန်များပြားသောသစ်ပင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
အလွန်ဥာဏ်ရည်ရှိပုံရိပ်ကိုလှည့်လည်။ အတွေးအခေါ်နှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများကိုမ ၀ င်ဘဲမည်သူကပထမဆုံးလာခဲ့သနည်း၊ ကြက်၊ ပထမ ဖြူ သူတို့ခဲ့ကြသည် debian, Slackware ကိုတီထွင် y ဦးထုပ်နီပုံကို ၉၀ ဒီဂရီဘယ်ဘက်သို့လှည့်ပါက၊ အထက်မှအောက်သို့၊ သို့မဟုတ်ဘယ်ဘက်မှညာသို့အစဉ်အတိုင်းဖြစ်သည်။
၏သင်တန်းကျွန်တော်တွေ့ဆုံပါလိမ့်မယ် ဖြူ Que ၎င်းတို့သည်ပထမသုံးခုမှဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ပါ သူတို့ဟာပုံကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အကုန်အထိအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖော်ပြလိမ့်မည် WebOS, Openwall, OpenWRT, Devil, SmothWall GPL, Puppy, Black Jug, Linux Console၊ မျှောဆရာ, GoboLinnux, RIP, NixOS, SliTaz, och နောက် (Gentoo မှဆင်းသက်လာသည်)Scratch From Linux၊ Alpine၊ Rock၊ Linux၊0(ဟုတ်ကဲ့၊ တည်ရှိသို့မဟုတ်တည်ရှိ ထိုနာမနှင့်အတူ distro)Ark၊ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ချန်လှပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ တစ်ချိန်တည်း၌မွေးဖွားသောလူသစ်များအတွက်သို့မဟုတ်လာမည့်သူများအတွက်၊
ကျနော်တို့ကပထမ ဦး ဆုံး၏ထောက်ပြချင်တယ် Slackware ကိုတီထွင် fue SuSE, သူသည်အလွန်ငယ်ရွယ်ဖြစ်ခြင်းဘဝကိုသူ့ကိုဆောင်ခဲ့ ဦးထုပ်နီ ထို့အပြင်အစောပိုင်းသားစဉ်မြေးဆက်ရှိခဲ့ပါတယ် WGS Linux Pro ကိုသို့သော်ထိုသား၏အသက်သည်အလွန်တိုတောင်းလှသည်။
ဒါဟာအသက်အကြီးဆုံးဖြန့်ဝေကြောင်းရှင်းပါတယ် Linux စကြာ ၀ universeာမှာရှိနေပြီးဒီနေ့အထိလည်းရှင်နေဆဲဖြစ်သည်။ debian, Slackware ကိုတီထွင် y ဦးထုပ်နီ.
Lယခင်ကြေညာချက်သည်၎င်းတို့သည်အဆင်ပြေဆုံးဖြန့်ဝေမှုဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ အဘို့, ဒါမှမဟုတ်အဆုံးအသုံးပြုသူအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်သည် သို့မဟုတ်သင်အားဖြင့်.
ဤပုံသည်ကွဲပြားသောရာထူးများမှတန်ဖိုးထားရန်လှည့်ရန်ကောင်းသည်။ ၉၀ ဒီဂရီလှည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဇောက်ထိုးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကထင်ရှားနေဆဲပဲ များပြားသောမျိုးဆက်များမှာ Debian ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်တ ဦး တည်းအံ့ဘွယ်သောအမှုဖြစ်သနည်း အဲဒါအရှိဆုံးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမထင်ဘူး sexy y ပူသော ပထမသုံး၏။ 😉
Debian ကလေးနှစ်ယောက်ရှိသောမိသားစုများ၏အရွယ်အစားမှာလည်းသိသာထင်ရှားသည်။ Knoppix y Ubuntu ကို.
ထိုအခါမိသားစုအောက်ပါအတိုင်း ဦးထုပ်နီနောက်ဆုံးတော့ Slackware ကိုတီထွင်.
အမြင်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်အချက်အနေဖြင့်ကျနော်တို့၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမိန့်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ် ပထမသုံးဖြန့်ချီရေးတစ်ခုစီ၏မိသားစုအရွယ်အစားမှာ - Debian -> Red Hat -> Slackware.
Linux သည်အလွန်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြားသည်။ ဘယ် distro ကိုငါရွေးရမလဲ။
ငါခေါင်းစဉ်ထုတ်ဝေဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ«လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်« ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာများစွာသောလူများ၏တကယ့်ဖြစ်တည်မှုကိုဖြန့်ဝေသောအားဖြင့်ဖြန့်ဖြူးပုံကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်များကိုတင်ပြခဲ့သည် ဖြူ, ငါရည်ညွှန်းသည် စည် Distros သို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံး Distros အကောင်းတစ် ဦး အစမှတ်အဖြစ်။ ဒီမှာငါဒီမှာငါထိန်းသိမ်းရန် တစ်ခုချင်းစီသည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ထင်မြင်ချက်၊ နားလည်မှုသို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်အရရွေးချယ်သည်. ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ မှားယှငျးသောလမ်းညွှန်ကိုကြှနျုပျတို့မပေးနိုငျပါ.
«ခေါင်းစဉ်အခြားဆောင်းပါး၌ဘာကြောင့် Debian ကို desktop ပေါ်မှာသုံးရတာလဲ။«, ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်အကြောင်းပြချက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးအဲဒါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာမပြောနိုင်ပါဘူး။ 😉
Linux ဟာစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်ငြင်းနိုင်သလား။။ Sun Linux နှင့်ဂြိုဟ်သုံးလုံး Debian, Slackware, Red Hat တို့ဖြင့် Solar System ဖြစ်ခြင်းသည် Galaxies, Suns နှင့်အခြား Astros ဖြင့်စကြဝiverseာတစ်ခုလုံးမှအဘယ်အရာဖြစ်သွားသနည်း။.
သင်ချစ်မြတ်နိုးရသောစာဖတ်သူ (သို့) နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူ၊ သင်၏ဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေသောသမုဒ္ဒရာများအတွင်းမည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုသင်ပိုမိုနှစ်သက်မည်ကိုပညာရှိစွာရွေးချယ်ရမည်။ လူကြိုက်အများဆုံး၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကောင်းတစ် ဦး အစမှတ်နိုင်ပါတယ်.
OpenSuSE (SuSE-Slackware) နှင့် CentOS (Red Hat) ကိုအဓိကထားသောဖြန့်ဝေမှုနှစ်ခုမှသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော desktop သို့မဟုတ် server ကိုရရှိရန်အထောက်အကူပြုသော DesdeLinux တွင်ထုတ်ဝေသောသို့မဟုတ် DesdeLinux တွင်ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးများကိုလိုက်နာရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ Debian မှစတင်သည်.
ခရီးစဉ်အပြီးတွင်စာဖတ်သူတစ် ဦး စီကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်ဆွဲပြီးမှတ်ချက်ပေးပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Linux distros များ၏အချိန်ကျော်ဖြန့်ဝေ
SuSE ဟာ RedHat မှဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာကိုငါကျိန်ဆိုခဲ့တယ် ...။ ဒါဟာ Slackware ရဲ့သမီးပဲအံ့သြမိတယ်။
မင်္ဂလာပါအိုမာ ငါမှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ရန်ယနေ့7pm တွင်သည်အထိရှိသည်။ မနက်ဖြန်နောက်တစ်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည် သင်၏ရှုပ်ထွေးမှုများသည် RHM, CentOS, SuSE, OpenSuSE နှင့်အခြားသူများအသုံးပြုသော packages များပုံစံမှ RPM မှလာနိုင်သည်။
Luble သည် Lubuntu ကို အခြေခံ၍“ timeline” တွင်အဘယ်မှာရှိသနည်း။
Slackware သည် Debian ထက်အနည်းဆုံး ၂ လပိုကြာသည်။ ထိုသုံးခု၏အဘယ်သူမျှမဂရပ်ကိုယ်တိုင်ကမြင်နိုင်ပါသည်သောပထမ ဦး ဆုံးဖြန့်ဖြူးသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက် (၂) ခုကိုထောက်ပြသည်။
၁) SLS နှင့် Slackware တို့အကြားဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားမှုသည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုပထမ ဦး ဆုံးဖြန့်ဖြူးသောဖြန့်ဖြူးခြင်းဟုဖော်ပြသည်။
(၂) Debian စီမံကိန်းစတင်ရန် Ian Murdock ကို အကြောင်းပြု၍ SLS ကိုစိတ်ပျက်ခြင်း။
SuSE Linux အတွက်မူ၎င်းသည် Slackware ကိုအခြေခံသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Jurix (2) ကိုအခြေခံသည်။ btrfs ကဲ့သို့သောနည်းပညာများကိုအတူတကွတီထွင်ရန်သို့မဟုတ်တွန်းအားပေးရန်ယခုအခါသူတို့အတွက်အများဖြစ်သော်လည်း Red Hat နှင့်အစပိုင်းတွင် packager နှင့်လက်တွေ့ကျခဲ့သည်။
မှတ်ချက်များကိုတုန့်ပြန်ရန်ယနေ့ည ၇ နာရီအထိသာကျွန်ုပ်ရှိသည်။ မနက်ဖန်တော့ငါကတိပေးမယ်၊
Pedruchini, Desktop Desktop ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုကောက် LXDE ဆိုတာဟာ့ဒ်ဝဲအရင်းအမြစ်များရဲ့စားသုံးမှုနိမ့်ကျတဲ့သွင်ပြင်ကိုဆိုလိုတာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် GNOME, KDE, Cinnamon, MATE, XFCE နှင့် LXDE ကဲ့သို့သောလူကြိုက်အများဆုံးစားပွဲခုံများထဲမှအပေါ့ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်လည်ပတ်ဖို့အကြံပေးပါ https://blog.desdelinux.net/escritorios-debian/
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားအဲဒီအကြောင်းစိတ်ကူးတစ်ခုရှိတယ်။ LXDE သည် Debian သီးသန့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက်။ အခြား Linux ဖြန့်ချိမှုများတွင်၎င်းကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်ကိုသင်ရှာနိုင်သည်။
မင်္ဂလာပါ, Pedruchini မှန်တယ် Lxle သည် Lubuntu from မှဆင်းသက်လာသော LXDE desktop နှင့်အတူဖြန့်ဖြူးသည်
သင်မှန်ပါတယ်။ Pedruchini နှင့် Joselu68 တို့မှဤသို့သော distro တည်ရှိမှုကိုငါရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ငါပဲ distrowatch.com ကိုသွားလည်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ် LXLE ဖြစ်ပြီး Lubuntu, Debian ကိုအခြေခံသည်။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ။
မှတ်ချက်ပေးရန်နှင့်ရှင်းလင်းပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Karlggest ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့သည်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ“ ယနေ့တိုင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးအလှည့်အပြောင်းများ” ဖြစ်ကြောင်းသာကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုသည်။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အလှည့်အပြောင်းသုံးခုဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့အဲဒီအုပ်စုနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာငြင်းစရာမလိုပါဘူး။ ၎င်းတို့အနက်အများစုသည်စီမံကိန်းများအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ဝေမှုများဖြစ်လာခဲ့သည်။
တောင်းပန်ပါရစေ။ ဒါပေမယ့် Ututo က Ubuntu ကနေဆင်းသက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ Tuquito-Linux အပြင်
En http://distrowatch.com/table.php?distribution=ututo UTUTO သည်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အာဂျင်တီးနားမှဖြစ်ပြီး GENTOO ကိုအခြေခံသည်
"Tuquito" သည် Ubuntu Debian ကိုအခြေခံသည်။ သစ်ကြံပိုးခုံနှင့်အတူအာဂျင်တီးနားပါပဲ။ distrowatch.com အရ GNOME, LXDE
သူကအလားတူအကြံပြုဖို့ရောက်လာတယ်။ : လက်မထောင်ပြခြင်း:
သင်၏ထည့် ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မူရင်းဆောင်းပါး updated ကိုတင်ပြပြီးပြီ
ကောင်းသောတနင်္ဂနွေ, Mauro ။ မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါသည်ငါ့ Links2 console ကို browser နှင့်အတူသင်ဖော်ပြထားတဲ့ Wikipedia စာမျက်နှာသွားရောက်ခဲ့ပြီး, ထိုပုံသည်သေချာပေါက်ပိုပြီးခေတ်မီသည်။ အလေ့အကျင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ကွက်ကစား။ မူပိုင်ခွင့်များမှာမူပိုင်ခွင့် (C) 2010-2012 Andreas Lundqvist၊ Donjan Rodic ဖြစ်သည်။ သို့သော်မူရင်း - မော်ကွန်းတိုက်မှတ်တမ်း - ဖိုင်ရာဇဝင်တွင်၊ Konimex သည်၎င်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်အထိမွမ်းမံပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မူရင်းစာရေးသူများသည်၎င်းကိုထပ်မံမွမ်းမံရန်ဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Luigys, FromLinux အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ၎င်းသည်ဝီကီပီးဒီးယားလင့်ခ်ကိုရည်ညွှန်းသည့်စာတန်းဖြင့်မွမ်းမံနိုင်မလားကြည့်ကြစို့။ Mauro, ထိုကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကပုံရိပ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပြီ။ FromLinux အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်သင်လုပ်ခဲ့သည့်ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရန်အခွင့်အရေးယူသည်။ ဆောင်းပါးသည် Linux Distros အမျိုးမျိုး၏အချိန်တွင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ကောင်းမွန်သောအမြင်ဖြစ်သည်။ Linux သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အပြောင်းအလဲအားလုံးကိုသိရန်အရေးကြီးသည်၊ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့အားအနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်သောအနာဂတ်အမြင်ကိုလည်းပေးသည်။
Luigys: ကျွန်ုပ်၏ Links2 မှမင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီနေ့ CentOS Hypervisor အကြောင်းပြီးဆုံးပြီလားဆိုတာကြည့်ရအောင်။ Eduardo Noel သည် desktop တစ်ခုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သော multimedia packages များနှင့်အတူ li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/ နှင့်အခြားသိုလှောင်မှုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်။ ယခုအပတ်တွင်သူသည်အားလပ်ရက်တွင်ရှိသည်။ လာမယ့်အပတ်မှာသူတို့ကိုငါပိုင်တော့မယ်။ မင်္ဂလာပါနှင့်အောင်မြင်မှု။
Linux ဖြန့်ဖြူးမှုအမျိုးမျိုးနှင့်အပိုင်းအစများသည်တကယ့်ပြproblemနာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုမပြုပြင်ပါက၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်တိုင်းတာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဖန်တီးသူများစုစည်းရန်နှင့်၎င်းတို့သည် Richard Stallman ၏အတွေးအခေါ်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ရှေ့တန်းတိုင်းတွင်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည်။
Luis Tz Fernándezကိုပြန်ပြောပါ
ရရှိနိုင် Wireshark 2.2.3
Elastix သေဆုံးချိန်မှ စ၍ Issabel ကိုမွေးဖွားသည်အထိ